#Zidane oo ku soo laabtay Real Madrid: Tababaraha ugu guulaha badan taariikhda kooxda - Get Latest News From Horn of Africa
#Zidane oo ku soo laabtay Real Madrid: Tababaraha ugu guulaha badan taariikhda kooxda
By axadle	 On Mar 11, 2019 Last updated Mar 31, 2019
Zinedine Zidane ayaa ku soo laabtay Real Madrid isagoo isha ku haya inuu jabiyo rikoorka kooxda ee koobabka.Zinedine Zidane ayaa ku laabanaya Real Madrid, kaliya 10 bilood ka dib markii uu shaqada ka tagay macalin ahaan.
Maamulka kooxda Real Madrid ayaa hadda si rasmi ah ugu dhawaaqay in ay kooxda dib ugu soo celiyeen Zinedine Zidane isla markaana shaqadii laga caydhiyay Santiago Solari, kadib markii uu muddo toban bilood ah ka hor iska casilay shaqada Real Madrid isla markaana ay Los Blancos dhibaato wayn soo martay waxaa markale la magacaabayZidane.
Santiago Solari ayaa maanta oo isniin ahayd soo gaadhay xarunta tababarka Real Madrid si uu u macasalaameeyo ciyaartoyda kooxda kowaad kadib markii lagu war galiyay in uu soo dhamaaday waqtigiisii isla markaana uu Zidane booskiisa buuxinayo.
Florentino Perez ayaa shaqo wayn u galay in uu Zinedine Zidane ku qanciyo in uu markii saddexaad heshiis u saxiixo Real Madrid waxayna arintani muujinaysaa ixtiraamka uu Zidane u hayo kooxdii uu ciyaartoyga iyo tababaraha ka soo noqday ee Real Madrid.
Kadib markii lix maalmood ay kooxaha Barcelona iyo Ajax ku soo gaba gabeeyeen xili ciyaareedkii Real Madrid, waxa uu markiiba Florentino Perez go’aan ku gaadhay in uu Zidane ka doonto isla markaana uu gacanta u saaray jeeg banaan oo uu ku dalban karo waxa uu doonayo sida wararka Spain hadda xaqiiyeen.
War saxaafadeed ka soo baxay Real Madrid ayaa hadda lagu shaaciyay magacaabista Zidane Zidane iyo waliba waqtiga uu saxaafada soo hor fadhiisan doono ee heshiiskiisa la soo bandhigi doono. Laakiin Solari ayaa la siiyay fursdaa ah in uu kooxda baaqi ku sii ahaan doono maadaama oo lagu tilmaamay in kooxdu ay sidii gurigiisa oo kale tahay.
War saxaafadeedka Real Madrid ayaa lagu bilaabay: “Boodhka Real Madrid oo shir yeeshay maanta oo ay taariikhdu tahay isniin, March 11,2019 waxay go’aan ku gaadheen in ay joojiyaan heshiiskii Santiago Solari ee ka tababaraha kooxda kowaad, halka Real Madrid ay isaga ugu deeqday fursada uu kooxda baaqi ugu sii ahaanayo”.
Qoraalka Real Madrid ayaa la sii raaciyay: “Real Madrid waxay Solari wanaag uga rajaynaysaa shaqadiisa, ka go’naanshihiisa iyo daacadnimadisa uu markasta ku soo bandhigayay kooxda taas oo gurigiisa ah”.
Qoraalka Real Madrid ee looga hadlay shaqada Zidane ayaa lagu yidhi: “Waxay sidoo kale boodhku ogolaadeen heshiiska rasmiga ah ee Zidane Zidane ee ka tababaraha Real Madrid taas oo dhaqan gali doonta isla inta xili ciyaareedkan ka hadhsan iyo saddexda xili ciyaareed ee soo socda oo ah ilaa June 30,2022”.
Florentino Perez oo hadda soo gaadhay Santiago Bernabeu ayaa saxaafada la hadli doona waxaana qoraalka Real Madrid lagu yidhi: “Madax waynaha Real Madrid iyo Zinedine Zinedine Zidane ayaa qolka saxaafada ee Santiago Bernabeu saxaafada kula hadli doona marka ay caawa saacadu tahay 8pm (CET)”.